Ikamelo Elinemibhede Elinemibhede Nesidlo Sasekuseni Elinemibhede E - I-Airbnb
Ikamelo Elinemibhede Elinemibhede Nesidlo Sasekuseni Elinemibhede E
East Melbourne, Victoria, i-Australia
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Gary
Inani labantu ababili embhedeni omkhulu kuhlanganise ne-Free Buffet, i-Movie Yamahhala kanye Nendawo Yokupaka Yamahhala. Amakamelo ane-ensuite, i-air-conditioning, ithelevishini, isiqandisi kanye netiye/izindawo zokwenza ikhofi.
Indlu Yesivakashi Yenkantolo yase-Georgia itholakala kalula e-George Street, e-East Melbourne - kuthiwa ingenye yezitaladi ezinhle kakhulu zase-Melbourne, lapho isikhathi nomoya ubuyiswa khona ngekhulu leminyaka.
Isikhundla sethu siphakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Melbourne CBD, i-Australian Tennis Open Centre (i-Rag Laver ne-Herense Arena), i-Olympic Park kanye ne-Melbourne Park Work Centre (Ammi Park), i-Melbourne Cricket Grounds (MCG), i-Botanical Gardens, i-Finzroy Gardens enhle, i-Major Hospital, i-Theatre District namagalari njll.
Eduze kunezindawo eziningi zokudlela nezitolo ku-Wellington Street eseduzane ne-Cosmopolitan Bridge Road, Richmond, enezitolo ezihamba phambili zokuklama e-Australia.
Izithuthi zomphakathi zisekude ngemizuzu engu-2-5. I-Tram: No 48 no-No 75, Isiteshi Sesitimela: Isiteshi sase-Jolimont.
ubusuku obungu-7 e- East Melbourne
Hlola ezinye izinketho ezise- East Melbourne namaphethelo